New Day Jobs | Fundamental Steps to SecureaJob | Career Blogs
LandYourDreamJob 20 Nov 2019
Ngwar Bo Mee,Head of Customer Success
ကိုယ် စိတ်အားထက်သန်တဲ့ အလုပ်ကို ရှာဖွေရရှိဖို့ တစ်ချို့ လူတွေအတွက် ကစိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဖြစ်ပေမယ့် တစ်ချို့အတွက် ကြတာ့ အဲ့အရာကစိတ်ပင်ပန်း အားအင်ကုန်ခမ်းစေတယ်။ အလုပ်ရှာရတာ စိတ်ပင်ပန်းတဲ့ သူအချို့အတွက် အောက် အချက်အလက် တွေဟာ အကျိုးရှိပြီးလက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်မည့် နည်းလမ်းတွေပါ။သင်နှစ်သက်တဲ့အလုပ်ကို ရရှိ ဖို့ သင်စိတ် ပျက်ခြောက်ခြားနေတာ မျိုးလုံးဝ မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်။
၁။ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲ၊ကိုယ် ဘာလုပ်တတ်လဲ ဆိုတာကို သုံးသပ်ပါ
သင်လုပ်ရှာဖို့ စပြီးစဉ်းစားပြီးဆိုတာနဲ့ ပထမဆုံးသင်လုပ်ရမယ့်အရာက သင်ဘာဖြစ်ချင်လဲ ၊ သင်ဘာလုပ်တတ်လဲဆိုတာ ကိုအရင်လေ့လာစမ်းစစ်ရမှာပါ။တကယ်လို့ သင်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကို မသိဘူးဆိုရင် list တစ်ခုလုပ်ပါ။အဲ့ list မှာ သင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ အချက်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်မလိမ်ညာပဲ ရေးပါ။အရမ်းကြီးကျယ် တဲ့အရာဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။သင် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ကျွမ်းကျင်လား သို့မဟုတ် ကိန်းကဏန်းတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျွမ်းကျင် လား။ သင့်ရဲ့ အားသာချက် ကောင်းကွက်တွေကို သင်ပိုသိလေလေ အလုပ်ရွေးချယ်ရတာ ပိုလွယ်ကူ လာလေလေ ဖြစ်တယ်။ ဒီအဆင့်မှ သင်တစ်ခု သတိထားရမှာကတော့ သင်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အခြားသူတွေနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်မိဖို့ပါပဲ။ ကိုယ့်အကြောင်းကို သေသေချာချာ သိအောင်လုပ်ပါ။
၂။ စနစ်တကျ အလုပ်ရှာ ပါ
ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ သင်လုပ်ရမှာကတော့ သင်အလုပ်ရှာတာကို စနစ်တကျ စီစဉ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဉာဏ်ကို လွှာပြီး သုံးရပါမယ်။ အကယ်၍ သင်က ပထမ အဆင့်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်ကို ရှာဖွေဖို့ မခဲယဉ်းတာ့ပါဘူး။ တကယ်လို့ သင်ဟာ ကိန်းကဏန်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့သူဆိုရင် စာရင်းအင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင် ပါ။သင်ဟာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းတယ်။သင်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ထိထိမိမိ ချပြနိုင်တယ်ဆိုရင် Marketing သို့မဟုတ် Communication နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အလုပ်အကိုင်တွေကို ရှာဖွေ လုပ်ကိုင် ပါ။သင်က လူတွေနဲ့ တွေ့ရတာကို နှစ်သက်တယ် လူတွေကို အကြံပေးရတာကို ကြိုက် တယ်ဆိုရင် sales (အရောင်းပိုင်း) (သို့မဟုတ်) အကြံပေးတဲ့အပိုင်း အစရှိသဖြင့် သက်ဆိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေကို ရှာဖွေ လုပ်ကိုင်ပါ ။ ဆိုရိုးစကားတစ်ခုလိုပေါ့နော်။ ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ အရာကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ခွင့် ရှိပါတယ်။သင် ဘာကိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို သိရင် -
သင် အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ company တွေကို list လုပ် ပါ။အလုပ်ခန့်မယ်သူက ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုတာကို စုံစမ်းပါ။အဲ့လို စုံစမ်းတဲ့အခါမှာ သင် Network ကို အသုံးပြုပါ။Facebook နဲ့ LinkedIn အစရှိတဲ့ social media တွေကိုလည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
၃။ ရှင်းလင်းတိကျတဲ့ CV တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပါ
သင်လုပ်ချင်တဲ့ Company တွေ သင်လုပ်ချင်တဲ့ ရာထူးတွေသိပြီးဆိုရင်တော့ အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ CV ကို ပြင်ဆင်ဖို့ လိုပါတယ်။အလုပ်ရှင်တွေ လိုချင်တဲ့ အဓိက အချက်အလက်တွေကို CV မှာရေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။CV မတင်ခင် အောက်ပါ အချက်အလက်တွေပါလားဆိုတာကို သေချာ စစ်ဆေးပါ။
သင်ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကို Highlight လုပ်ထားလား?
သင် ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ ဆိုတာကို ပြော ထားလား?ဥပမာ - အတတ်မြန်တဲ့သူ၊အမြဲနှိုးကြားနေတဲ့သူ၊တိကျတဲ့သူ၊ယုံကြည်ရတဲ့သူ သို့မဟုတ် တာဝန်ယူစွမ်းရှိတဲ့သူ
သင် ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Project တွေ, ရရှိခဲ့ဖူးတဲံ ဆုတွေကို ဖော်ပြထားလား?
သင့် ပညာအရည်အချင်းနဲ့ သင်ကို ဆက်သွယ်ရမယ့် လိပ်စာကို မှန်မှန်ကန်ကန်ရေးထားလား?
စာလုံးပေါင်းအမှားတွေ နှင့် အမြင်ရှုပ်စေနိုင်တဲ့ Color တွေ ပါလား?
သင့်ရဲ့ အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် Hiring Manager တွေအနေနဲ့ သင်အပေါ် ပထမဆုံး Impression ဖြစ်စေတဲ့အရာက သင့်ရဲ့ CV ပါ။ အဲ့တော့ CV ကသင့်ရဲ့ သံအမတ်ပေါ့။အဲ့တာကြောင့် CV ကို စာရွက်လေးတစ်ရွက်လို့ပဲ မသတ်မှတ်ပါနဲ့။တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး အလန်းဆုံး ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ထားပါ။
၄။ CV ကိုတင်တဲ့အခါ လူမှန်ဆီရောက်ပါစေ
အခုဆိုရင် သင် ဘာလုပ်ရမယ်၊ဘယ်သူတွေ ကိုဆက်သွယ်ရမယ် ဘယ်လို အလုပ်လျှောက်ရမယ်ဆိုတာ လည်းသိပြီ ဆိုတော့ CV တင်လို့ ရပြီပေါ့။ သင့် CV ကိုသင် လျှောက်ချင်တဲ့လုပ်ငန်း ရဲ့ အလုပ်ရှင်ဆီ (သို့မဟုတ်) Hiring Manager ဆီကို တန်းလျှောက်ပါ။Email ကနေ အလုပ်လျှောက်မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Email ကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် Professional ဆန်ဆန်ရေးပါ။ Job portal တွေဆီမှာ CV တင်မယ်ဆိုရင်လည်း သင်လျှောက်တဲ့ Role နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အရည်အချင်းတွေကို Highlight လုပ်ပြီးရေးပါ။သင့်ကို သူတို့ ဘာကြောင့် အလုပ်ခန့်သင့်လဲ ဆိုတာကို မြင်သာအောင် ရေးပါ။ စာအရေးအသား တိကျ ပြတ်သားပါစေ။ တပြိုင်နက်ထဲမှာလည်း ယဉ်လည်း ယဉ်ကျေးပါစေ။
၅။ သင်လျှောက်ခဲ့တဲ့ Roles တွေကို အမြဲ မှတ်ထားပါ
သင့်ကို အလုပ်ခန့်ချင်တဲ့ Company ကဖုန်းဆက်လာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်လျှောက်ထားတဲ့ အလုပ်က များလွန်းလို့ ဘယ် ရာထူးအတွက်လျှောက်ထားတာမှန်း မသိတော့ဘူး။ ဘယ်ရာထူးအတွက် ဆက်တာလဲလို့ မေးတာက အရမ်း မဖြစ်သင့်တဲ့အရာပါ။ ကိုယ့်ကို လုပ်ငန်းရှင်က အထင်အမြင်သေးသွားနိုင်တယ်။ အဲ့တာကြောင့် အရေးကြီးတာက ကိုယ်လျှောက်ခဲ့တဲ့ အလုပ်နဲ့ရာထူးတွေကို မှတ်ထားပါ။တစ်ပတ်အတွင်း Company တွေဆီက ဘာသတင်းမှ မကြားရဘူးဆိုရင် Follow up လိုက်ပါ။
၆။ သင်ရဲ့ Digital Footprint ကို ဂရုစိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သင့်ရဲ့ Social Media အသုံးပြုပုံကို ဂရုစိုက်လိုပါတယ်။အခုလို နည်းပညာခေတ်မှာ အလုပ်ရှင်တွေ Hiring မန်နေဂျာတွေက သူတို့ ဝန်ထမ်းအသစ်ဖြစ်မယ့်သူရဲ့ အမူအကျင့် တွေ ကို social media ကနေ လေ့လာကြပါတယ်။ Digital Platform တွေမှာ သင့်ရဲ့ ရုပ်ပုံကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ တဝှမ်းလုံးမှ အလုပ်အကိုင်များကို New Day Jobs မှတဆင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။